Ugu Weyn Ee Pansies
Noocyada iyo noocyada jebinta: Maxaa la dooranayaa?
Sidee qurux badana u eega ubaxyada. Iyo joogitaanka badan oo ka mid ah noocyo ay ka dhigtaa pansies xitaa soo jiidasho dheeraad ah for bannaanka u. Ubax xilliga hore, qaabka ubaxa ee jilicsan iyo caraf aad u jilicsan oo qof kasta oo la kulma ubaxan jilicsan. Iyo nooca rabshada kori karo iyo sida loo kala saaro iyaga, waxaan ka wada hadli doonaa qodobkan.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Pansies 2019